Kooxaha Barcelona iyo Inter Milan oo qarka u saaran inay ku heshiiyaan saxiixa Ivan Rakitić – Gool FM
(Spain) 10 Maajo 2019. Sida ay xaqiijinayaan wargeysyada kasoo baxa gudaha dalka Spain kooxaha Inter Milan iyo Barcelona ayaa ku dhow inay isku afgartaan heshiiska uu laacibka reer Croatia ee Ivan Rakitić ugu biiarayo Nerazzurri suuqa xagaaga ee soo socda.
Sida laga soo xigtay wargeyska reer Spain ee “Mundo Deportivo” kooxaha Barcelona iyo Inter ayaa qarka u saaran inay isku afgartaan heshiiska uu Ivan Rakitić ugu wareegayo Nerazzurri, kaasoo ku kici doono aduun dhan 50 milyan euro.
Wargeyska Isbaanishka ah ayaa dhinaca kale tilmaamay in Inter Milan ay u harsan tahay kaliya inay ku qanciso Rakitić u dhaqaaqista qalcadda, “San Siro” xilli ciyaareedka soo aadan.
Laacibka reer Croatia ee Ivan Rakitić ayaa iska diiday inuu ka dhaqaaqo kooxda Barcelona xagaagii lasoo dhaafay, inkastoo loo soo bandhigay dalabyo badan, sababa la xiriira balanqaad uu ka helay saraakiisha kooxda reer Catalonia ee ah in la wanaajin doono heshiiskiisa, balse ilaa iyo haatan ma aysan dhicin.
Si kastaba ha ahaatee, sida ay wararku xaqiijinayaan kooxda Barcelona ayaa dooneysa inay iibiso Ivan Rakitić xagaaga soo aadan si ay kaga faa’ideystaan dhaqaalaha kaga soo xarooda, qiimaha ay ku doonayaan inay ku sameeyaan saxiixyo cusub.
Kooxda Blaugrana ayaa sidoo kale la saxiixatay xidiga khadka dhexe ee reer Holand iyo kooxda Ajax ee Frenkie de Jong, kaasoo ay kaga maarmi karto adeega Rakitić hadii ay dhacdo inay iska iibiso suuqa xagaaga ee soo socda.